Hello Nepal News » १०० अन्तर्राष्ट्रिय गोल पूरा गरेपछि रोनाल्डोका चार भनाइ
१०० अन्तर्राष्ट्रिय गोल पूरा गरेपछि रोनाल्डोका चार भनाइ
पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गत राति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा १०० गोलको आँकडा पूरा गरे । युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा स्वीडेनविरुद्ध उसकै घरमा खेल्नेक्रममा रोनाल्डोले गोल गरेर १०० गोलको कीर्तिमानी कोसेढुंगा पूरा गरेका हुन् । उनले पहिलो हाफको ४५औं मिनेटमा २८ मिटर दूरीबाट फ्रि किकमार्फत् दर्शनीय गोल गर्दै १००औं गोल पूरा गरे ।
पोर्चुगलको जर्सीमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको त्यो १००औं गोल थियो । त्यसपछि उनले दोस्रो हाफमा पनि अर्को शानदार गोल गरे । बक्स बाहिरबाट रकेट सटमा उनले हानेको शक्तिशाली प्रहारले सोझै जाली चुमेको थियो । गत राति एक खेलमा २ शानदार गोल गरेका रोनाल्डोे खेलको ‘म्यान अफ् द म्याच’ समेत घोषित भए ।
गत रातिको २ गोलसँगै रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि कूल १०१ गोल गरेका छन् । यससँगै ३५ वर्षका उनी अब २१औं शताब्ताीमा १०० गोल पूरा गर्ने एक मात्रै सक्रिय खेलाडी बनेका छन् भने समग्रमा दोस्रो । रोनाल्डो अब इरानका अली डेईको १०९ अन्तर्राष्ट्रिय गोलको रेकर्ड तोड्न मात्रै ९ गोलले टाढा छन् । गत राति १०० अन्तर्राष्ट्रिय गोल पूरा गरेपछि रोनाल्डोले मिडियासँग कुरा गर्दै दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ:
१. यो जित र विजयी यात्राका लागि म ज्यादै खुसी छु । १०० र १०१ गोलले थप खुसी दिएको छ । ढिलो–चाँडो म यो गर्न सक्थें, आज गरें । अब बाँकी निर्णय ईश्वरको । यी गतिशील र प्रतिभावान् युवा खेलाडीसँग खेल्न पाउँदा म निकै सहज महसुस गर्छु । र, उनीहरूसँग म निकै खुसी छु ।
२. म रेकर्ड तोड्नकै लागि खेल्दिनँ । म राम्रो गर्दै जान्छु भने रेकर्डहरू आफैं तोडिँदै जान्छन् । यो त लामो करिअरमा एकपछि अर्को गरेर हुँदै जान्छ । म सधैं भन्ने गर्छु, रेकर्डहरू आफैं तोडिन्छन् र बन्छन् । आजको दिन मेरा लागि मिठो दिन थियो ।
३. केही दिनअघि मेरो खुट्टाको औंलामा समस्या थियो । मलाई थाहा थियो, म चाँडै रिकभर हुन सक्छु । र, मैले थप जोखिम नबढाउन क्रोएसियासँग खेलिनँ । म दोस्रो खेल खेल्न चाहन्थें । मसहित वा मबिना पनि टिमले क्रोएसियासँग राम्रो खेल्नुपर्छ भन्नेमा म थिएँ । टिमले साँच्चै राम्रो खेल्यो । मेरो टिमप्रति म खुसी छु ।
३. १०९ गोलको रेकर्ड पनि कुनै दिन तोडिनेछ । किनभने, यही नै मेरो अन्तिम खेल होइन । हामी अझै थुप्रै खेल खेल्नेछौं र जित्नेछौं । १०० गोल पूरा भएपछि म आराम गरेर बस्नेछैन । म अन्तिम समयसम्म पुग्दा १२० वा १३० गोलसम्म गर्न सक्छु । तर, अहिले मेरो लक्ष्य नेसन्स लिगमा टिमलाई अघि बढाउनु र दोस्रोपटक उपाधि च्याम्पियन बन्नु हो । १०९ गोलका लागि मलाई कुनै हतार छैन । ढिलो–चाँडो त्यो पूरा हुन्छ । र, म अझै परसम्म पुग्नेछु ।
४. अवश्य पनि, नयाँ सिजनअघि म केही राम्रो गर्न चाहन्थें, त्यो पूरा भयो । अब म इटाली फर्किनेछु । हामी नयाँ सिजनका लागि तयार हुनुपर्छ । गत सिजन हामीले राम्रो गर्न सकेनौं । यसपटक सबैखाले उपलब्धिका लागि हामी संघर्ष गर्नेछौं । म यो ऊर्जा र आत्मविश्वास लिएर युभेन्टस फर्किनेछु । म नयाँ सिजन सुरुआत गर्न एकदमै आतुर छु ।
प्रकाशित मिति २४ भाद्र २०७७, बुधबार १०:२१